बाह्रै महिना बजारमा पाइने स्याउ स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक छ । फाइबरयुक्त स्याउमा भरपूर फाइब्रोन्युटि्रएन्ट पाइन्छ, जुन हृदयका लागि फाइदाजनक मानिन्छ । स्याउमा एन्टि-अक्सिडेन्ट तत्व हुनुका साथै भरपूर मात्रामा क्याल्सियम पाइन्छ, जसले हड्डीलाई मजबुती प्रदान गर्नुका साथै टुट्नबाट समेत बचाउँछ । स्याउले शरीरमा कोलेस्टेरोलको मात्रा घटाउनुका साथै सुगरलाई नियन्त्रणमा राख्न मद्दत गर्छ । शरीरमा रक्तप्रवाहलाई यथावत राख्न पनि स्याउको सेवन उपयोगी मानिन्छ । स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले निकै उपयोगी स्याउलाई केही मानिस छिल्कासहित खान रुचाउँछन् भने केही छिल्का झिकेर खान रुचाउँछन् । छिल्का निकाल्दा स्याउमा पाइने सबै पोषणतत्व त्यससँगै निस्केर जान्छ ...
यसरी हटाऊँ बच्चामा खानाको अरुचि
काठमाडौं । हरेक आमाको चाहना हुन्छ, बच्चाले राम्ररी खाना खाइदेओस् । बच्चाले भरपेट खाना खाएपछि आमाको मन पनि अघाउँछ । तर, अक्सर बच्चाहरु खाना खान मानिरहेका हुँदैनन् । र, आमा र उनका अभिभावक जबर्जस्ती खुवाउने प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । बच्चालाई खानामा अरुचि र भोक नलाग्नुमा उनीहरुको गल्ति हुँदैन । अभिभावकको कमजोरीको परिणाम हो यो । अक्सर अभिभावक केवल खानाको मात्रामा ध्यान दिन्छन् । तर, त्यसको स्तरबारे ख्याल गर्दैनन् । किनभने, बच्चालाई सानै उमेरदेखि स्वस्थ बानीमा अभ्यस्थ गराउनुपर्छ । बच्चाको खानपानमा लापरवाही गर्नु हुँदैन । समय तालिका निश्चित गरौं बच्चालाई सानै ...
अक्सर हाम्रो भान्सामा अण्डा पाक्छ । अण्डा पकाउन छिटो र खान उत्तिकै मीठो । तर, अण्डा खरिद गर्दा त्यो बिगि्रएको छ/छैन भन्ने कुराको हेक्का हामीलाई नहुनसक्छ । अण्डा बिगि्रएको छ/छैन भन्ने कुरा हेरेर थाहा पाउने कुरा भएन । यसको उत्पादन मिति पनि हुने कुरा भएन । यद्यपि, धेरै झण्झट मान्नु पर्दैन । केही काइदा छन्, जसले अण्डाको अवस्था बुझ्न सकिन्छ । त्यो पनि सजिलै । चिसो पानीमा डुबाउनुस् अण्डालाई चिसो पानी राखेको कचौरामा हाल्नुस् । पानीको मात्रा अण्डाभन्दा दोब्बर हुनुपर्छ । ताजा अण्डा पानीमा डुब्छ र कचौराको भित्तामा ...
गर्भवती हुने मन छ ? यी कुरा थाहा पाउनुस
हरेक महिलाका लागि आमा बन्नु जीवनकै सुखद अनुभूति हो । ईश्वरले महिलालाई अर्को जिन्दगी पैदा गर्ने अद्भूत शक्ति दिएका छन् । तर, आजको भागदौडपूर्ण जीवन र व्यस्त जीवनशैलीको असर महिलाहरुको प्रजनन्मा पर्न थालेको छ । त्यसैले महिलाहरुले गर्भधारण गर्न विभिन्न व्यवधानको सामना गर्नुपरिरहेको छ । स्वस्थ गर्भधारणका लागि जीवनशैली पनि स्वस्थ हुनु जरुरी छ । चिकित्सकलाई भेटौं गर्भवती हुने योजना बनाउनुअघि चिकित्सकसँग सल्लाह लिनुस् र आफ्नो जाँच गराउनुस् । गर्भधारण गर्न कुनै मेडिकल समस्या भए/नभएको यसबाट पत्ता लाग्ने छ । जस्तैः एसटीडी अर्थात् सेक्सुअल्ली ट्रान्समिटेड डिजिज । जाँचबाट तपाईं शारीरिक ...
मधुमेह रोगीले तिहारमा यसरी खान सक्छन् मिठाइ
तिहार, झिलिमिली चाड । र, मिठाइको चाड । माघे संक्रान्तिमा तरुल, तिजमा खीर, दशैंमा मासु भनेजस्तै तिहारमा खाइने परिकार हो, मिठाइ । त्यसमा पनि सेलरोटी । मिठाइ, मीठो र गुलियो परिकार । तर, सबैका लागि यो उपयोगी नहुन सक्छ । चिनीजन्य परिकार भएकाले यसले रगतमा ग्लुकोजको मात्रा बढाउाछ । र, मधुमेहको जोखिम पनि निम्त्याउाछ । मधुमेह रोगीका लागि त मिठाइ उपयोगी हुादै हुादैन । के गर्ने त ? मधुमेहका विरामीले अघिपछि खानपानमा विशेष ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ । अझ, तिहारको समयमा विशेष ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक छ । तिहारमा ...